I-Afrika uMda oMtsha wezoKhenketho: IiNtetho ngeNigeria iZiko leSathelayithi le-GTRCMC
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » I-Afrika uMda oMtsha wezoKhenketho: IiNtetho ngeNigeria iZiko leSathelayithi le-GTRCMC
Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Iindaba zaseNigeria zokuPhula • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Umphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, u-Edmund Bartlett (ekunene) ubamba uMkomishinala oPhezulu wase-Nigeria eJamaica, uHloniphekileyo Maureen Tamuno kwiingxoxo, njengoko ebethetha noMphathiswa, nge-27 kaJulayi ka-2021. Ngexesha leseshoni kuye kwavezwa ukuba iingxoxo ngoku kuyaqhubeka ukusekwa kweziko lesathelayithi yeGlobal Resilience kunye neZiko loLawulo lweNtlekele eNigeria.
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica kunye noSihlalo weZiko loKomeleza uKhenketho kunye noLawulo lweNtlekele (GTRCMC), u-Edmund Bartlett, ubhengeze ukuba iingxoxo ngoku ziyaqhubeka malunga nokusekwa kweziko lesathelayithi le-GTRCMC eNigeria.
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica angathanda ukutyelela i-Abuja kungekudala ukuze enze amalungiselelo ngokusemthethweni.
Oku kungaphawula ukusekwa kweZiko leSathelayithi le-Afrika lesibini leZiko loKomeleza uKhenketho kunye noLawulo lweNtlekele,
UMphathiswa uBartlett uvakalise ukuba angayithanda iNigeria ukuba ibe liziko lokuqala elisekwe eNtshona Afrika.
Ethetha kwintlanganiso ebisekuqaleni izolo kunye noMkomishinala oPhezulu wase-Nigeria eJamaica, u-Maureen Tamuno, kwii-ofisi zoMphathiswa zase-Kingston, u-Bartlett wabelana ngala mazwi: Iziko leZiko loKomeleza uKhenketho kwiHlabathi liphela kunye neZiko loLawulo lweNtlekele (GTRCMC). ”
UBartlett wongeze ngelithi: “Okwangoku sizakunika lonke ulwazi olufunekayo ukuze sikwazi ukuseka eli Ziko. Ngoku sinesiseko ekungasekwa kuso iziseko zophuhliso, kwaye sikwanomyolelo kunye nokubandakanyeka koluntu. Ndingathanda ukuba iNigeria ibe liziko lokuqala elisekwe eNtshona Afrika. ”
Iziko lesathelayithi lokuqala i-GTRCMC yasekwa eKenya, kwiYunivesithi yaseKenyatta. Liziko lesatellite lesithili, linoxanduva lweMpuma Afrika, kwaye liyasebenzisana ne-GTRCMC yamazwe aphesheya, ebekwe kwiYunivesithi yaseWest Indies (UWI), Jameyikha.
“IZiko laseNigeria liyakuba yindawo efanelekileyo yokuxhasa iziko esele lisungulwe eKenya, kuba ngawona mazwe abalulekileyo eAfrika aqondwa lihlabathi. INigeria ikwindawo yokuqala - yaziwa ngokuba noqoqosho olomeleleyo, inabantu abaninzi, kwaye wenze into ebangela umdla ngeNollywood, eshiye impembelelo yenkcubeko kwihlabathi, ”utshilo uMphathiswa uBartlett.